Knockout miafina ao an-dakilasy! Thor Schrock Trouces Marketing amin'ny Internet
Sabotsy, Desambra 8, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Thor Schrock
Vakio hatramin'ny farany raha te hahazo vola $ 1,000 CASH!
Doug sy ny maro aminareo dia nanohana ahy tamin'ny fandaharana zava-misy momba ny Internet Millionaire Next, ary na dia izaho no mpihazakazaka faharoa dia nanana fotoana nahafinaritra aho hianatra avy amin'ireo mpampianatra marketing amin'ny Internet mahavariana ao amin'ny Sekoly miafina.
Ary izaho dia mpianatra tena nahay. Tena tsara tokoa fa mitondra roa amin'ireo mpampianatra mpampianatra ahy taloha, Marlon Sanders sy Armand Morin ho any anaty ala any amin'ny Joel Comm's Fandaharam-pifaneraserana ao an-dakilasy miafina!
Ity ny zavatra nianarako sy ny fomba nandreseko ny sasany amin'ireo mpivarotra Internet tsara indrindra eran-tany.
Meteza ho marketing Ninja fa tsy jiolahimboto marketing.
I Marlon Sanders dia nampianatra ahy ny teôria ao ambadiky ny zavatra iray izay fantatro tamin'ny lasa. Nilaza izy fa ny hery rehetra dia misy fahalemena miaraka aminy. Raha manohitra mpifaninana ambony ianao dia tsy tokony hanafika ny herin'izy ireo. Te hanafika ny fahalemena miaraka amin'ny herin'izy ireo ianao.
Ohatra, raha miady amin'ny Best Buy manandrana mivarotra solosaina ianao dia aza manokatra magazay lehibe iray misy mpiasa amidy sy mpanohana antonony mahay ary fisafidianana PC marobe.
Fa kosa amidio solosaina avo lenta izay namboarina manokana ho an'ny filan'ny mpampiasa ary manome serivisy ahazoana loka sy drafitra fanohanana hanohana azy io. Amin'ny alàlan'ny fanafihana ny fahalemena ao anatin'ny herin'izy ireo dia lavinao ny tombony azo amin'ny fifaninanana Best Buy.
Arakaraka ny vakivaky anao no tsara kokoa tokony hananan'ny sarinao
Ireo tranonkala toa an'i Amazon, na Google, na Youtube dia tranokala an-tapitrisany dolara misy logo fantatry ny mpitsidika ary natoky azy ireo ny olona.
Nanazava tamiko i Armand Morin fa tsy misy ny lozam-pifamoivoizana raha toa ka azonao atao ny maka sary an-tsaina ireo logo an'ireo orinasa etsy ambony ao an-tsainao dieny izao.
Vokatr'izany, raha maniry ny hanaovanao hetsika ny iray amin'ireo tranokala ireo, na mividy boky izany na mampakatra horonantsary, dia azo inoana kokoa fa handray izany ianao satria matoky fa matoky ny anarana sy ny sary famantarana ianao.
Ny vola lany indrindra amin'ny orinasa dia ny mahazo mpanjifa voalohany. Ny varotra faharoa ho an'ny mpanjifa iray ihany dia tokony ho cakewalk raha efa nasiana marika tsara ianao ary fantatry ny mpanjifanao amin'ny manaraka rehefa mandondona ianao.
Raha 1,000 XNUMX ny sary iray, inona no mendrika vidéo?
Ny fampiasana horonantsary handefasana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao dia endrika kanto, ary raha mahafehy izany ianao dia hanana fitaovana mandaitra izaitsizy tsy jeren'ny ankamaroan'ny olona.
Na iza na iza dia afaka mandefa backlink ao anatin'ny roa segondra. Tsy zava-dehibe ny miditra amin'ny Fikarohana Google. Fa ny maka horonan-tsary dia mitaky fotoana sy talenta vitsivitsy. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahay mitondra fiara amin'ny alàlan'ny horonan-tsary, ka tsy manelingelina azy mihitsy.
Mike Koenigs Nampianarin'i Mike ahy ny fomba hamokarana horonantsary iray, ento eo imason'ny masomaso, ary avy eo ento any amin'ireo tranonkala ireo mason-koditra ireo. Nampianariny ahy ny fomba fampiasana horonan-tsary handefasana fifamoivoizana toy ny ataon'ny motera fikarohana, ary singa lehibe iray nanosika ahy ho ambony noho ireo mpivarotra guru hafa izany.
Nanazava izy fa handefitra ny horonan-tsary ratsy amin'ny teboka iray ny olona, ​​fa raha ratsy kosa ny feonao dia tsy handalo ny roa segondra voalohany ianao. Raha handany vola amin'ny fitaovana ianao dia mividiana mikrô tsara aloha, ary avy eo mahazo fakantsary tsara.
Avy eo dia nisy ny jiro fandefasana jiro $ 30 izay azonao atao amin'ny zavatra ao amin'ny Home Depot izay hanazava ny horonan-tsarinao manontolo. Fahalalana mahatalanjona kokoa izay hahatonga ny horonan-tsarinao ho toa mahatalanjona ary hanome anao lohalaharana amin'ireo olon-kafa vitsivitsy izay manipy horonan-tsary an-tserasera.
The Long Tail dia sakaizan'ny bilaogera tsara indrindra
Nanazava i Dave Taylor fa raha manangana lahatsoratra araka ny tokony ho izy izay tadiavin'ny olona ianao dia hijinja fifamoivoizana kely amin'io lahatsoratra io mandritra ny fotoana tsy voafetra rehefa mitady ny zavatra tadiaviny ny olona.
Amin'ny farany ny teti-dratsy lava amin'ny famahanana bilaogy dia hiteraka fisintonana fifamoivoizana kely izay manampy amin'ny fisianà tranonkala matanjaka iray.
Azonao atao ny mikaroka na inona na inona amin'ny Internet ary mahita ny iray amin'ireo pejin'i Dave Taylor any amin'ny valiny.
Symphony an'ny Guru Butt-Kicking
Raha tokony handray ny rafitry ny guru iray fotsiny aho dia nampifangaro fomba maro avy ao amin'ny Secret Classroom mba hanaovana milina marketing izay matanjaka kokoa noho ireo mpampianatra ahy irery.
Natomboko tamin'ny tranokala telo natao ho fampiroboroboana ny vokatra mitovy. Ny tranonkala marobe dia midika fotoana bebe kokoa ahafahana mitaky toerana ao amin'ny valin'ny fikarohana 10 ambony ary manery ireo tranonkala hafa hidina.
Nifindra haingana aho mba hampidinana ny tranokalako alohan'ny fanombohana mialoha, ary www.homehydrots.cxom no tranonkalako voalohany.
Nanaraka ny torohevitr'i Marlon aho dia nila nanafika fahalemena tao amin'ny juggernaut miafina. Tsy milalao mitovy amin'izany? Mametaka cookie amin'ny PC-nao ve aho? lalao referral, nanafika ny Secret Classroom tamin'ny vidiny tamin'ny fanolorana vola.
Joel dia manolotra komisiona $ 200 ho an'ny vondrona sekretera miafina rehetra amidiko, ka dia nanolotra vola $ 100 ho an'izay rehetra mividy amin'ny tranokalako aho. Ny tiako holazaina dia matotra, raha mikasa ny hividy ny sety ianao, maninona raha tehirizo ny $ 100, sa tsy izany?
Raha vantany vao fantatro fa ny anaran'ny set DVD dia ny Classroom miafina, nampiasa teknika fototra SEO / SEM aho hahazoana toerana # 2 ao amin'ny Google ho an'ny tranokala nextinternetmillionairedvd.com.
Avy eo dia nanakarama kaody aho hanome ahy taratasy fanoratana mailaka ahafahako manangona anarana sy adiresy mailaka amin'ny tranokala ary mitahiry izany ao anaty tahiry. Nahavita nanangona olona 170 mahery liana tamin'ny tolotra fihenam-bidy aho.
Avy eo namokatra horonantsary santionany miafina 12 (1 isaky ny mpampianatra) nataoko tamin'ny sary nalaina tamina horonantsary sy audio avy amin'ny fizarana Next Internet Millionaire. Nampiasako ny teknikan'i Mike hanoratako lohateny, famaritana, URL ary hafatra fahatelo ambany izay hahavita. Nampiakariko tany amin'ny tranonkala fizarana horonantsary tokana teto amin'ny planeta tany izany.
Avy eo aho dia nitana ny toerana rehetra sahan'asa ao amin'ny Google, Yahoo, ary Youtube mikaroka ilay teny hoe efitrano miafina. Manaraka, tonga ny fotoana hanafihana ny Fikarohana Blog.
Nanomboka namoaka tao amin'ny bilaogiko imbetsaka isan'andro aho tamin'ny alàlan'ny torohevitra lava nataon'i Dave Taylor. Raha nilalao ady cookie tamin'ny alàlan'ny rohy afiliana ny fifaninanana, nanangona adiresy mailaka aho ary nanorina fifandraisana.
Avy eo tamin'ny 5 Desambra dia nosintonina i Joel. Nandefa ny lisitry ny lisitra nataoko tamin'ny mailaka aho, namoaka lahatsoratra tamin'ny bilaogy, nametraka doka Google Adwords, ary nampakatra ireo pejin-tsaiko taorian'ny fanombohana
Rehefa nipetraka ny vovoka, izaho dia mpiara-miasa tamin'i Joel # 1 taorian'ny andro 1. Nialoha an'i Marlon Sanders ary koa Armand Morin aho? ireo mpampianatra izay nampianatra ahy ny Sekoly miafina. Mety mbola hanao rallye hisambotra ahy ry zareo, fa eo no miditra ny dingana 2!
Mila anao aho hanampy ahy hamita ilay asa ary hanaporofo fa ny habetsaky ny fampianarana ao an-dakilasy miafina dia mahery kokoa noho ny fivoriana tsirairay.
Mihazakazaka aho a fifaninanana ao amin'ny bilaogiko miaraka amin'ny vola 1,800 $ sy loka ho azony. Ny hany mila ataonao mba hitifirana ny fandresena dia ny fanaovana lahatsoratra, manaova hevitra ary asio rohy blogroll.
Zahao ny fifaninanana ary ampahafantaro ahy ny hevitrao. Hotehiriziko foana i Doug amin'ny fomba fanaovako izany, saingy ny tanjoko dia ny hamita ilay asa natomboko tany Colorado tamin'ny volana Aogositra, ary amin'ity indray mitoraka ity dia heveriko fa ho tsikaritr'i Joel izany.
Teo ambany fitarihan'i Thor?, Schrock Innovations Computer Company dia voafidy ho orinasa mpanamboatra solosaina mahaleo tena an'i Lincoln # 1 isan-taona nanomboka tamin'ny taona 2001 tao amin'ny tsena misy mpifaninana mahery setra marobe. Thor dia nitombo ny fanavaozana an'i Schrock avy teo amoron'ny bankiropitra tamin'ny taona 2004 ho $ 1.5 tapitrisa isan-taona isan-taona amin'ny herin'ny serivisy amin'ny taona 2009 miaraka amin'ireo toerana any Omaha sy Lincoln, NE.
26 Jun 2008 amin'ny 12:27 AM
$ 200.00? Moa ve tsy toy ny $ 1500 napetraka ary tsy teo amin'ilay fampisehoana ve ianao? Ouch.